भाडा: तपाईको डोमेन को छ? | Martech Zone
हिजो, म एक क्षेत्रीय कम्पनीको बोर्डको साथ थिएँ र हामी केहि माइग्रेसनको बारेमा छलफल गरिरहेका थियौं। केहि चरणहरू आवश्यक पर्ने केहि डोमेन रेकर्डहरू अपडेट हुन आवश्यक पर्दछ, त्यसैले मैले कसलाई कम्पनीको DNS मा पहुँच छ भनेर सोधें। त्यहाँ केही खाली टाँसाहरू थिए, त्यसैले म छिट्टै गरेँ GoDaddy मा Whois लुकअप कहाँ डोमेन रेजिष्टर गरियो र को सम्पर्क सम्पर्क सूचीकृत थियो।
जब मैले नतिजा देखेँ, म साँच्चै स्तब्ध भएँ। व्यापार वास्तव मा थिएन आफ्नै तिनीहरूको डोमेन दर्ता, एक एजेन्सी हो कि उनीहरु संग काम गरीरहेछन्।
यो अस्वीकार्य छ।
के भयो भने
को एक सानो खेल खेल्न गरौं के भयो भने.
के हुन्छ यदि तपाइँ अन्य प्लेटफार्महरु को लागी तपाइँको डोमेन दर्ता सेटिंग्स अपडेट गर्न को लागी तपाइँ एकीकृत गर्न जाँदै हुनुहुन्छ? के तपाइँसँग छ तपाइँको तेस्रो पक्ष तिर्नुहोस् केहि चीज अपडेट गर्न को लागी तपाइँ स्वामित्वमा हुनु पर्छ? यो कम्पनीले वास्तवमा गरेको थियो ... र एजेन्सीले उनीहरुलाई डोमेन दर्ता वास्तवमा हरेक बर्ष लागत भन्दा बढी चार्ज गरिरहेको थियो!
के हुन्छ यदि तपाइँको व्यापार डोमेन दर्ता म्याद सकिन्छ? हामीले यो भएको देखेका छौं र कम्पनीले यो थाहा पाउन को लागी खाता को मालिक हो र यो दर्ता नवीकरण गर्नु भन्दा पहिले यो अरु कोहि द्वारा दर्ता गरीएको छ।
के हुन्छ यदि तपाइँसँग बिलि छ विवाद वा तपाइँको डोमेन को रजिस्ट्रेंट को रूप मा सूचीबद्ध छ जो कम्पनी संग कानूनी तर्क?
के हुन्छ यदि कम्पनी हो कि तपाइँको रजिस्ट्रेंट को रूप मा सूचीबद्ध छ जान्छ व्यवसाय बाहिर वा उनीहरुको सम्पत्ति रोक्का छ?
के हुन्छ यदि कम्पनी हो कि तपाइँको रजिस्ट्रेंट को रूप मा सूचीबद्ध छ असक्षम गर्दछ ईमेल ठेगाना जुन तपाइँको कम्पनी को डोमेन को मालिक को रूप मा सूचीबद्ध छ?
त्यो सहि छ ... यी मुद्दाहरु को कुनै पनी तपाइँ समस्या को कारण हुन सक्छ! यस विशिष्ट उदाहरण मा, मेरो ग्राहक लाई पछिल्लो दुई दशकहरु मा आफ्नो व्यापार 'ब्रान्ड र आफ्नो डोमेन को अधिकार अनलाइन डलर को लाखौं लगानी गरेको छ। हार्यो कि गम्भीर रूप मा तिनीहरुको व्यापार लाई असर गर्ने छ - उनीहरुको कर्पोरेट ईमेल बाट उनीहरुको अनलाइन उपस्थिति को लागी सबै कुरा तल ल्याउने।
तपाइँको डोमेन स्वामित्व हुनुपर्छ कहिल्यै एक बाहिरी आईटी कम्पनी वा एजेन्सी सहित एक तेस्रो पक्ष को लागी छोडिन्छ। जसरी तपाइँ एक तेस्रो पक्ष तपाइँको खुदरा लीज वा तपाइँको घर बंधक को मालिक को रूप मा अनुमति दिनुहुन्न, तपाइँको डोमेन दर्ता तपाइँको सम्पत्ति हो!
Whois संग तपाइँको डोमेन दर्ता कसरी हेर्ने
Whois एक सेवा हो कि सबै डोमेन दर्ता कम्पनीहरु जहाँ तपाइँ शारीरिक वा प्रोग्रामेटिक रूपमा एक डोमेन को स्वामित्व हेर्न सक्नुहुन्छ। ध्यान राख्नुहोस् कि सबै जानकारी सार्वजनिक छैन। कम्पनीहरु आफ्नो स्वामित्व निजी को रूप मा चिन्ह लगाउन सक्छन्। कुनैपनि अवस्थामा, यदि तपाइँ Whois को उपयोग गरी तपाइँको डोमेन जानकारी हेर्नुहुन्छ, तपाइँ यो बताउन सक्षम हुनु पर्छ कि यो तपाइँको डोमेन दर्ता खाता मा हो (उदाहरण को लागी। GoDaddy), वा यदि तपाइँ ब्यापार वा रजिस्ट्रारलाई चिन्नुहुन्न ... तल ट्र्याक गर्न को लागी गर्छ।
यहाँ एउटा नमूना हो को हो परिणाम:
WHOIS खोज परिणाम डोमेन नाम: martech.zone रजिस्ट्री डोमेन आईडी: 83618939503a4d7e8851edf74f2eb7d0-DONUTS रजिस्ट्रार WHOIS सर्वर: whois.godaddy.com रजिस्ट्रार यूआरएल: http://www.godaddy.com अपडेट मिति: 2019-05-15T19: 41: 47Z निर्माण मिति: 2017-01-11T01: 51: 30Z रजिस्ट्रार दर्ता समाप्ति मिति: 2022-01-11T01: 51: 30Z रजिस्ट्रार: GoDaddy.com, LLC रजिस्ट्रार IANA आईडी: 146 रजिस्ट्रार दुर्व्यवहार सम्पर्क ईमेल: abuse@godaddy.com रजिस्ट्रार दुर्व्यवहार सम्पर्क फोन: +१.४1.4806242505०XNUMX२२५०५ डोमेन स्थिति: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited डोमेन स्थिति: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited डोमेन स्थिति: clientRenewProhibited https://hibited स्थिति: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited
रेजिस्ट्रन्ट संगठन: DK New Media
रजिस्ट्रेंट राज्य/प्रान्त: इन्डियाना रजिस्ट्रन्ट देश: अमेरिका रजिस्ट्रेंट ईमेल: https://www.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=martech.zone टेक ईमेल मा सम्पर्क डोमेन होल्डर लिंक चयन गर्नुहोस्: https मा सम्पर्क डोमेन होल्डर लिंक चयन गर्नुहोस्। : //www.godaddy.com/whois/results.aspx? domain = martech.zone Admin Email: सम्पर्क डोमेन होल्डर लिंक चयन गर्नुहोस् https://www.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=martech.zone नाम सर्वर: NS09.DOMAINCONTROL.COM नाम सर्वर: NS10.DOMAINCONTROL.COM
यदि तपाइँ पाउनुहुन्छ कि व्यापार, इमेल ठेगाना (es), वा रजिस्ट्रेंट को डोमेन दर्ता कम्पनी एक subcontractor, एजेन्सी, वा आईटी कम्पनी हो कि तपाइँ तपाइँको DNS प्रबन्ध गर्न को लागी भाडामा लिनुभएको छ, उनीहरुलाई तुरुन्तै परिवर्तन गर्नुहोस् रजिस्ट्रन्ट व्यापार र ईमेल ठेगाना तपाइँलाई फिर्ता र सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ आफ्नै डोमेन दर्ता खाता हो जहाँ यो सेट अप छ।
दिमागमा राख्नुहोस्, प्रत्येक डोमेन दर्ता बिभिन्न सम्पर्कहरु संग सम्बन्धित छ कि तपाइँ तपाइँको बाह्य संसाधनहरु को उपयोग वा परिवर्तन मा अधिसूचना प्राप्त गर्ने क्षमता प्रदान गर्न को लागी अनुमति दिन्छ:
रजिस्ट्रार - जो डोमेन को मालिक हो
व्यवस्थापक - सामान्यतया, डोमेनका लागि बिलि contact सम्पर्क
टेक - एक प्राविधिक सम्पर्क जो डोमेन प्रबन्धन गर्दछ (बिलि outside बाहिर)
मैले ठूला कम्पनीहरूका डोमेनहरू गुमाएको देखेको छु किनकि उनीहरूले कहिल्यै महसुस गरेनन् कि उनीहरू आफैंको स्वामित्व पाएनन्, तिनीहरूका उप-ठेकेदारले गरे। मेरो एक ग्राहकले मुद्दा हालेको थियो र अदालतमा जानको लागि उनीहरूको डोमेनलाई उनीहरूको हातमा फर्काउनका लागि एक कर्मचारीलाई छोडे पछि जानु थियो। कर्मचारीले डोमेनहरू खरीद गरे र तिनीहरूको नाममा दर्ता गरे, कम्पनीको मालिकलाई नजान।
मैले आईटी कम्पनीलाई तुरून्त ईमेल सिर्जना गर्‍यो र उनीहरूले कम्पनीको मालिकको स्वामित्वमा भएको खातामा डोमेन हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गरे। उनीहरूको प्रतिक्रिया तपाईले अपेक्षा गरेको जस्तो थिएन ... उनीहरूले सीधे मेरो ग्राहकलाई लेखे र संकेत गरे कि म खोजिरहेको छु चोर्नु मेरो नाम मा डोमेन राखेर कम्पनी, केहि म कहिल्यै अनुरोध गरियो।
जब मैले प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दिए, तब उनीहरूले मलाई बताए कि उनीहरूले त्यसो गर्नुको कारण ग्राहकको अनुरोधमा डोमेन प्रबन्धन गर्नु हो।
के तिनीहरूले कम्पनीको मालिकलाई रेजिस्ट्रेन्टको रूपमा राखेका थिए र आफ्नै ईमेल ठेगाना थप्नका लागि प्रशासक र टेक सम्पर्क गर्नुहोस्, म स्वीकृति दिनेछु। यद्यपि, तिनीहरूले वास्तविक परिवर्तन गरे रजिस्ट्रार। राम्रो छैन। यदि तिनीहरू बिलि and र प्रशासक सम्पर्क थिए भने, तिनीहरूले DNS प्रबन्धन गर्न सक्थे र बिलि and र नवीकरणको पनि ख्याल राख्थे। तिनीहरूलाई वास्तविक रजिष्ट्रेन्ट परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्दैन।
साइड नोट: हामीले यो पनि पहिचान गर्‍यौं कि कम्पनीले एक विशिष्ट डोमेन पंजीकरण नवीकरण भन्दा लगभग %००% बढी चार्ज गर्दै थियो, जसलाई उनीहरूले डोमेनको व्यवस्थापनलाई कभर गर्ने बताएका थिए। र तिनीहरूले शुल्क लागी wal महिना पहिले नवीकरण अन्तिम म्याद भन्दा चार्ज गर्दै थिए।
स्पष्ट हुनको लागि, म यो आईटी कम्पनीको एक नराम्रो एजेन्डा रहेको बताउँदै छैन। म निश्चित छु कि मेरो ग्राहकको डोमेन रेजिष्ट्रेसनको पूर्ण नियन्त्रणले उनीहरूको जीवन धेरै सजिलो बनायो। लामो समय मा, यो पनि केहि समय र ऊर्जा बचाएको हुन सक्छ। जे होस्, यो खाता मा registrant ईमेल परिवर्तन गर्न को लागी अस्वीकार्य छ।
के हुन्छ यदि तपाइँ तपाइँको डोमेन को प्रबंधन को लागी एक तेस्रो पार्टी चाहानुहुन्छ?
यदि तपाइँको डोमेन रजिस्ट्रारले उद्यम सुविधाहरु प्रदान गर्दैन जहाँ तपाइँ तपाइँको डोमेन मा सहयोगीहरु वा प्रबन्धकहरु लाई थप्न सक्नुहुन्छ
त्यहाँ समयहरु छन् कि कम्पनीहरु एक तेस्रो पक्ष को लागी आफ्नो डोमेन को प्रबंधन गर्न चाहन्छन्, त्यसैले यहाँ एक काम को आसपास छ। म सामान्यतया कम्पनी एक स्थापित छ वितरण ईमेल ठेगाना (जस्तै। यो तरिका को एक संख्या मा उपयोगी छ:
तपाइँ आवश्यकता अनुसार विक्रेताहरु लाई थप्न र हटाउन सक्नुहुन्छ।
वितरण सूची मा सबैलाई अपडेट गरीन्छ यदि खातामा कुनै परिवर्तन छ (पासवर्ड परिवर्तन सहित)।
प्रो टिप: तपाइँको डोमेन मालिक ईमेल ठेगाना तपाइँको वास्तविक डोमेन को रूप मा उही डोमेन संग सेट नगर्नुहोस्! यदि तपाइँको डोमेन दर्ता रेकर्ड समाप्त हुन्छ वा तपाइँको DNS परिवर्तन हुन्छ, यो तपाइँ ईमेल सूचनाहरु प्राप्त गर्न को लागी यो असम्भव बनाउन को लागी जाँदैछ! अधिकतर व्यवसायहरु एक भन्दा बढी डोमेन आफ्नो व्यापार संग सम्बन्धित छ ... त्यसैले अन्य डोमेन मध्ये एक मा एक खाता वितरण सूची सेट अप गर्नुहोस्।
तपाईंको कम्पनीको डोमेन रेजिष्ट्रेसनको लागि मेरो सल्लाह
मैले आफ्नो क्लाइन्टलाई एक पाउन सल्लाह दिएँ GoDaddy खाता, अधिकतम ... दशकको लागि उनीहरूको डोमेन दर्ता गर्नुहोस् ... र त्यसपछि IT कम्पनीलाई ब्यवस्थापकको रूपमा थप्नुहोस् जहाँ उनीहरू DNS जानकारी पहुँच गर्न सक्नेछन्। मेरो ग्राहकको CFO भएको हुनाले, मैले सिफारिश गरें कि उनीहरूले बिलि forको लागि त्यो सम्पर्क थप्न सक्दछ र हामीले उनको खातालाई सूचित गर्‍यौं जुन डोमेनलाई लामो अवधिको लागि भुक्तान गरिएको थियो।
आईटी कम्पनी अझै पनी DNS को उनके प्रबंधन को लागी भुक्तान गरीन्छ, तर पनी पञ्जीकरण को लागी to गुणा अतिरिक्त तिर्न कुनै आवश्यकता छैन। र, अब कम्पनीमा कुनै जोखिम छैन जुन उनीहरूको डोमेन तिनीहरूको नियन्त्रण बाहिर छ!
कृपया तपाइँको कम्पनी को डोमेन नाम जाँच गर्नुहोस् र सुनिश्चित गर्नुहोस् कि स्वामित्व तपाइँको कम्पनी को खाता र नियन्त्रण अन्तर्गत छ। यो केहि हो कि तपाइँ कहिल्यै तेस्रो पक्ष को लागी नियन्त्रण त्याग्नु हुँदैन।
तपाईंको डोमेनको लागि Whois जाँच गर्नुहोस्
टैग: डोमेन पहुँचडोमेन नाम सर्भरडोमेन गोपनीयताडोमेन दर्ताgodaddyको हो